AGV စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ AGV စက် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏တဦးတည်းရှိခဲ့ AGV စက် ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ, ဆန်တင်ပို့သူများအတွက် Taiwan။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအရည်အချင်းကိုကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အသင်းကအလုပ်ကို centralized စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုကိုထူထေ​​ာင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူ့-based စီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးပြည့်စီးဆင်းမှုစတင်ရေး။ အဖွဲ့အစည်းကိုသင်ယူခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်န်ထမ်းများအလုပ်ကြိုးစားရန်အတူတကွစည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း, ယုံကြည်ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်, အရည်အသွေးဦးစားပေး, oriented လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ကူးနှင့်အတူကျနော်တို့ပိုကြီးပြီးအားကောင်းသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ဖောက်သည်ပိုတန်ဖိုးထမ်းဆောင်နိုင်, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှပိုပြီးမြှုပ်နှံထား။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြ၏။
အကောင်းဆုံး AGV စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် AGV စက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ်ထူးခြားချက်: အရာဝတ္ထုများကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ဆွဲရန်. ဤ semi semi heavy duty AMV ကိုစက်ရုံများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့သယ်ယူရန် trollies များကိုသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်. ရော်ဘင်-CT ကိုလှည့်နိုင်စေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်/maneuver ၃၆၀̊၎င်း၏အရပျ၌,ဒါကြောင့်လုပ်ကိုင်ရန်ကြီးမားသောအာကာသမလိုအပ်ပါဘူး.၎င်း၏ဝန်စွမ်းရည်ဖောက်သည် fit မှချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်’s လိုအပ်ချက်များ.၎င်း၏အဖုံးကိုသံမဏိပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်,၎င်းသည်အခြား AMV များထက်ပိုမိုပေါ့ပါးစေသည်. ၎င်းသည် ၁၀ မီတာအကွာမှရွေ့လျားခြင်းနှင့်မလှုပ်မယှက်အတားအဆီးများကိုထောက်လှမ်းနိုင်သောတည်ငြိမ်သောအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်,မြင်ကွင်းကျယ် ၂၇၀ နှင့်̊ ,စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်ပတ်ရန်အလွန်လုံခြုံစေသည်,နှင့် lithium ဘက်ထရီများတပ်ဆင်ထားသည်,၄ အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်-၈ နာရီမဟုတ်-အားသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲရပ်တန့်ပါ. သတ်မှတ်ချက်: အတိုင်းအတာ(LxWxH):၈၀၀x၅၀၀x၄၀၀ မီလီမီတာ ယာဉ်အလေးချိန်.: ±၁၀၀ ကီလိုဂရမ် မက်စ်.ဝန်/ပါဝါရုတ်သိမ်းရေး.:ကီလို ၂၀၀ မက်စ်.မြန်နှုန်း:မီတာ ၄၀/မိ. ထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်း.:၃၆၀̊ မက်စ်.ပြန်လည်နေရာချနိုင်ခြင်း.:၃ စင်တီမီတာ ဘက်ထရီသက်တမ်း.:၈ နာရီအထိ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား.:လီသီယမ်ဘက်ထရီ ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၃၀ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၆၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ်ထူးခြားချက်: လေဆိပ်၌ပို့ဆောင်ရန်,ဆေးရုံများ,ဟိုတယ်များနှင့်အခြားများစွာ. ရော်ဘင်-Deli သည်ကျစ်လစ်။ ပေါ့ပါးစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်,အဓိကအားဖြင့်ဖန်မျှင်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်,သို့မှသာလျင်မြန်သောသွက်လက်မှုနှင့်အရှိန်ဖြင့်ထိန်းကျောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်.၎င်းသည်ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်,လူပြည့်နေသောနေရာ၌လည်ပတ်ရန်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းစေသည်. ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်,ရော်ဘင်အတွက်အများဆုံးဝန်-Deli သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀ ကီလိုဂရမ်သာရှိသည်,ဒါပေမယ့်လှည့်နိုင်တယ်/maneuver 360 သည်၎င်း၏နေရာ၌ရှိသည်,ကျဉ်းကျဉ်းသို့မဟုတ်လူစည်ကားနေရာများအတွက် operating များအတွက်သင့်လျော်သောအောင်.၎င်းကိုမတူညီသောအထပ်များသို့ရောက်ရန်အဆောက်အအုံများရှိဓာတ်လှေကားများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်.လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့်အတူ,ရော်ဘင်-အသင့်စားဆိုင်သည်3အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်-၄ နာရီမဟုတ်-အားသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲရပ်တန့်ပါ. သတ်မှတ်ချက်: အတိုင်းအတာ(LxWxH):450x350x900 မီလီမီတာ ယာဉ်အလေးချိန်.: ±၅၀ ကီလိုဂရမ် မက်စ်.ဝန်/ပါဝါရုတ်သိမ်းရေး.:ကီလို ၃၀ မက်စ်.မြန်နှုန်း:၄၀~မီတာ ၆၀/မိ. ထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်း.:၃၆၀̊ မက်စ်.ပြန်လည်နေရာချနိုင်ခြင်း.:၃ စင်တီမီတာ ဘက်ထရီသက်တမ်း.:၂~၃ နာရီ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား.:လစ်သီယမ် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၃၀ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၆၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ်ထူးခြားချက်: Pallet mover ရော်ဘင်-Fork သည် pallets များကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ရွှေ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်,pallets များအထက်တွင်တင်သောဝန်,စက်ရုံများနှင့်သိုလှောင်ရုံများတွင်.၎င်းသည် ၁၃၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိတင်နိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံး ၅၀ မီတာတွင်ရွေ့နိုင်သည်/မိ.၎င်းကိုသံမဏိဖြင့်အပြည့်အ ၀ ပြုလုပ်ထားသည်,၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား AMV များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလေးနက်စေသည်. အရာဝတ္ထုထောက်လှမ်းရေးအာရုံခံကိရိယာများနှင့်လုံခြုံရေးအာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသည်,ရော်ဘင်-Fork သည်သူတို့သယ်ဆောင်သွားမည့် pallets အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်,အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့်မတိုက်ဘဲလူနေကျပ်သောသို့မဟုတ်လူစည်ကားသောနေရာများတွင်လုံခြုံရေးကိုလုပ်ဆောင်ပါ. သတ်မှတ်ချက်: အတိုင်းအတာ(LxWxH):၁၈၀၀x၉၀၀x၈၀၀ မီလီမီတာ ယာဉ်အလေးချိန်.:ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 250kg မက်စ်.ဝန်/ပါဝါရုတ်သိမ်းရေး.:1300kg မက်စ်.မြန်နှုန်း: ±၅၀ မီတာ/မိ. ထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်း.:၃၆၀̊ မက်စ်.ပြန်လည်နေရာချနိုင်ခြင်း.:၃ စင်တီမီတာ ဘက်ထရီသက်တမ်း.:ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်.၃~၄ နာရီ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား.:လီသီယမ်ဘက်ထရီ ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၃၀ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၆၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံး AGV စက် ကိုထောက်ပံ့ပေးရန်အလေးအနက်အလုပ်လုပ်သောသဘောထားရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးနည်းပညာသည်ကမ္ဘာကို ဦး ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ ၀ ယ်သူများ၏တန်ဖိုးထားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအမှာစာအမြောက်အများကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ ယ်သူများနှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။